Fallo Dawlada Itoobiya Oo Qarka U Saaran Burbur + Shacabka Oo Gadoodsan Iyo Wararkii Ugu Danbeyay Ee Laga Helayo | Berberatoday.com
Fallo Dawlada Itoobiya Oo Qarka U Saaran Burbur + Shacabka Oo Gadoodsan Iyo Wararkii Ugu Danbeyay Ee Laga Helayo
Hargeysa(Berberatoday.com)-Bannaanbaxyo waaweyn oo dalka Itoobiya ka dhacay Axaddii, oo ay ka qayb qaadanayeen kumannaanka ruux ee ku nool magaalada Gondar ee gobolka Amxaarada ayaa noqday tusaale naadir ah oo loo soo qaadan karo mudaharaadyada dalkaasi ka dhacaya ee dawladda lagaga soo horjeedo.
Bannaabaxa ayaa laga abaabulay baraha bulshada xiriirto, balse kooxina ma aysan sheeganin masuuliyadda dibadbaxaas oo imaanaya laba todobaad kaddib markii uu isla magaaladaas ka dhacay mudaharaad ay ku dhinteen 15 ruux kuwaas oo isugu jiray shacab iyo laamaha ammaanka.
Mudaharaadyadan u dambeeyay waxay salka ku hayaan kaddib markii bulshada Amxaarada Welkait oo hadda hoostagta gobolka Tigray ay dalbadeen in dhulkooda la hoosgeeyo maalmulka gobolka Amxaarada oo aysan dooneynin inay hoos tagaan Tigreega.
Amxaarada ayaa dalka soo maamuli jirtay, luuqadooda ayaana ilaa iyo hadda ah mid laga isticmaalo dalka Itoobiya intiisa badan, waana qowmiyada labaad ee ugu badan Itoobiya. Oromada oo ah qowmiyada koowaad ayaa iyaduna bannaanbaxyo rabshado wada ka dhigtay dhowaan.
Macalim Culuumta Siyaasadda dhiga oo fadhigiisu yahay dalka Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Ethiopia ay wajaheyso mustaqbal aan caddeyn, haddii ay qaban weyso doroasho xor iyo caddaalad ah.
Dowladda Ethiopia ayaa sheegeysa inuusan jirin kacdoon, balse ay arrinmahan wadaan shaqsiyaad yar oo ay ugu yeertay argagixiso oo taageero ka helaya dowladda Eritrea